आंग्ल समाजमा तहगत उचनीच कम गर्न सबैलाई साझा ‘यू’ले पुकार्न थालिएको हो । तहगत उचनीच कायम राख्न हत्ते हाल्ने ओली सर ‘तपाईं’ भनिनस् भन्दै मिडियासँग रुष्ट भाछन् । मिडियाले ‘तपाईं’ भने ‘हजुर’ किन भनिनस् भन्लान्, ‘हजुर’ भने ‘प्रभु’ किन भनिनस् भन्लान् । सामन्तसँग सकिँदैन, मान्यवर !
सञ्चारमाध्यममा के सामान्यभन्दा सामान्य पनि मर्यादा छैन ? मिडियाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई तिमी भन्नु नेपाली संस्कार र परम्परा किमार्थ होइन । मिडियामा काम गर्ने यो देशका सबैभन्दा ठूला हुन् ?
किताबमा कर लगाइएको होइन । विचार, बुद्धि र विवेकउपर बन्देज लगाइएको हो ।
हजुरको दिमाखमा अझै घुसेन है ? हजुर पुस्तक लेखक हो कि ती पुस्तकबाट कुम्ल्याउने महाराज हो ? आम्दानी गरेसि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन ?
पुस्तकमाथिको कर पठन–संस्कृति र पढ्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकले पढ्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको हो भने एक नेपालीले एक वर्षमा कति पुस्तक पढ्न पाउने हो, त्यो पनि बताइदिनुस् । पढ्न नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासविरुद्ध सदन र सडकबाट हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ ।
सादा पेपर आयात गर्दा भन्सार लाग्ने तर छापेको किताब आयात गर्दा भन्सार नलाग्ने कहीँ हुन्छ त ? स्वदेशी छापाखानालाई प्रोत्साहन दिनका लागि विदेशबाट छापेर आएको किताबमा भन्सार लगाउनैपर्छ । अनि मात्र स्वदेशी छापाखानाले प्रोत्साहन पाउँछन् ।
वैकल्पिक पार्टी आपले दिल्लीमा ७० मा ६२ सिट ल्याएर शानदार जितेको लगत्तै आफूलाई वैकल्पिक ठान्ने साझा पार्टीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई राखेछ । कतै मंसिर महिनामा बेसीको पाकेको धान छाडेर डाँडातिर लप्सी टिप्न जाने यात्रा नबनोस् । शुभकामना !
‘खान पुगोस्, दिन पुगोस्’ भन्नेहरूले कसो ‘दासदासी राख्न पाउनुपर्छ’ भनेर घोषणापत्रमा लेखेनन् !